Akhlaaqiyaadka Suubban | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdiraxmaan Cabdillaahi Adam — January 23, 2020
Soddon sannaddood ayuu geeri ka cabsanayay oo dhul yaal ayuu ahaa intaas ba. Waxa lagu sheegay in uu ku dhacay xanuunka la yidhaahdo Kansarka, nololna wax rajo ah kamuu qabin. Laakiin ugu dambayn waxa uu ku dhintay shil gaadhi ( umuu dhiman xanuunkii Kansarka ahaa ee lagu yidhi wuu ku dilayaa).
In aad qaddarka aamintaa waa waajib saaran qof kasta oo Muslim ah – dulucda sheekaduna waa intaas.
Nin faqiir ah ayaa waxa uu soo iibsaday saddex xabo oo liin macaan ah ( Portugal) xabadii ugu horraysay markii uu jeexay ayaa waxa uu arkay in ay qudhuntay, wuu iska tuuray, xabadii labaad ayuu haddana jeexay markaasuu arkay in ay iyaduna qudhuntay.
Xabadii saddexaad inta uu laydhkii guriga bakhtiiyay ayuu indhahana isku qabtay markaasuu mugdigii ku liqay.
Dulucda sheekadu waxa ay tahay mararka qaarkood arrimaha nolosha badhkood waa in la iska indho tiraa. Wax kastaa uma baahna fal-celin iyo jawaab. In duuduub lagu liqo ayay ku kallifaysaa waxyaabaha qaarkood.
Nin gaadhi bas ah sii koraya ayaa ay kabtiisi ka dhacday, markaasuu kabtii kalena ka daba tuuray intuu yidhi: laga yaabaa in qof miskiin ahi ka faa’idaysto. Waayo isagana hal kab oo uu xidhan yahay waxba u tari mayso – qofka kale ee helana kabtii kale ee ka dhacdayna waxba isna u tari mayso.
Markaas muhiimadu waxa ay tahay mararka qaarkood dadku waa in ay wax huraan – waxna ka tanaasulaan, waayo isku adkayn waxba soo kordhin mayso.
Roobabka ka da’aya waddanka aad joogtid waxa laga yaaba in ay kuu tahay maalintaas maalin boqran oo jawiguna deggen yahay, halka roobka ka da’aya isla waddan kale ay u tahay cimilo xun oo jawigooduna halis ku jiro maalintaas.
Dulucda sheekadu waxa ay tahay waxyaabo adiga kuula muuqda qurux ayaa qof kale la fool xun. Naftaada waa inaad bartaa sida loo rummeeyo kala duwaanaanshaha, aragtiyaha kala duwanna waa inaad aqbashaa.
Tags: Akhlaaqiyaadka Suubban
Next post Habdhiska Muruqyada & Habdhiska neefsiga-Qeybta 3aad
Previous post Falsadda Quruxda iyo Farshaxanka